Denmark: Booliska oo xaqiijiyey in ay dileen ninkii weerarka ka fuliyey Copenhagen - Wargane News
Home Somali News Denmark: Booliska oo xaqiijiyey in ay dileen ninkii weerarka ka fuliyey Copenhagen
Denmark: Booliska oo xaqiijiyey in ay dileen ninkii weerarka ka fuliyey Copenhagen
Hal qof ayaa ku dhintay labo kalena wey ku dhaawacmeen weerar labaad oo xalay ka dhacay magaalada Copenhagen ee caasimadda dalka Denmark. Weerarkan ayaa ka dhacay meel ku dhow dhisme ay ku cibaadeystaan dadka Yuhuuda (Synagogue), qofka dhintey ayaa ahaa nin dhalinyaro ah oo Yuhuudi ah.
Booliska dalka Denmark ayaa sheegay in nin hubeysan uu madaxa ka toogtay qof rayid ah isla markaana dhaawac u geystay labo qof oo Boolis ah, waxaana uu isla markii ka baxsaday goobta. Booliska ayaa xaqiijiyey in ninkaani weerar ku qaadey ciidamo Boolis ah oo ku sugnaa Nørrebro halkaas oo Boolisku ku toogteen, Booliska ayaa sheegaya in weerarkan ninkaani uu keli ku ahaa, laakiin uu socdo baaritaan weyn oo gadaal laga shaacin doono qofka uu yahay.
Shacabka ayaa looga digay in ay tagaan faras magaalaha Copenhagen ama goobaha ay isku yimaadaan dadka.
Saxaafadda caalamka ayaa si weyn u falanqeynaysa weeraradan oo ay la barbar dhigayaan kuwii bishii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Paris oo ay ku dhinteen 12 qof.
Somaliland: Mudaharaad Shalay Gil-gilay Magaalada Burco
Aniga & Qur’aanka : Sheekh Berberaawi – Q4aad
Murrashax Muuse Biixi oo soo kormeeray goobaha ay codayntu ka socoto ee degmooyinka caasimadda Hargeysa
Austria: Thousands of Syrian Migrants arrive in Austria after Hungary provides buses
Somaliland: Taliyaha Ciidamada Booliska Gobolka Togdheer Oo Ka Warbixiyay Qaabkii Ay Usoo Qabteen Dableydii Saaka Dishay Ninka Darawalka Ah